Soo jeedinta guurka - Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ku bixiso maalinta weyn | Bezzia
U dabaaldeg soo jeedintaada qaab ahaan!
Susana godoy | 13/01/2022 16:00 | Aroosyada
Dabaaldegga soo jeedinta guurku waa mid kale oo ka mid ah caadooyinka waaweyn ee ilaa maanta la raacayo. Inkasta oo ay run tahay in hab-maamuusku aanu ahayn sidii hore. Intaa waxaa dheer, had iyo jeer waxay noqon doontaa mid jecel lammaanaha, laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaan ku siin doonaa fikrado taxane ah si aad u qorsheysato xilliga soo jeedintaada si faahfaahsan.
Sababtoo ah markaan ku dhawaaqno meherkeena, had iyo jeer waxaa jira waqtiyo gaar ah oo aan dhammaan ku dhicin maalinta weyn. Taasi waa sababta aan ugu raaxeysan karno dadkayaga mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinka aan qaadeyno. Tallaabooyin farxad leh oo aan mar walba rabno inaan wadaagno waana sababta soo jeedintaadu aysan u soconayn in laga tago.
1 Waa maxay soo jeedinta gacanta
2 Maxaa lagu sameeyay soo jeedin
3 Maxaa la siinayaa lamaanaha
4 Intee in le'eg ayaa la sameeyaa ka hor arooska
Waa maxay soo jeedinta gacanta
Mararka qaar Waxaan heli karnaa xoogaa jahwareer ah soo jeedinta iyo xilliga weydiinta guurka. Waa run in lammaane kastaa uu leeyahay fikrado, waana kuwa ay tahay in ay fuliyaan, sababtoo ah hadda ma jiro borotokool la mid ah kuwii hore. Marka laga bilaabo tan, waa run in codsiga guurku yahay waqti gaar ah marka qayb ka mid ah lammaanaha ay caddeyso oo ay soo jeediso soo jeedintaas muhiimka ah. Laakiin soo jeedintu waa daqiiqad kale oo dabbaaldeg ah, oo ah la kulanka dadka la jecel yahay taas oo codsiga loo dabaaldego. Muddo dheer ka hor waxa ay ahayd arrin aad u dhib badan, sababtoo ah waxa uu ahaa ninkii arooska ahaa oo ka codsan jiray aabbaha aroosadda 'ogolaansho' si uu u guursado. Halkaa qoysasku waxay lahaayeen eraygii ugu dambeeyay. Maanta wax walba si wanaagsan ayey isu beddeleen!
Maxaa lagu sameeyay soo jeedin
Horay ayay noogu cadaatay taas waa xaflad, in kastoo ka yar arooska. Kaliya waalidiinta, walaalaha ama qoyska dhow Iyadu waxay noqon doontaa tii iyada u timaada. Sidaa darteed, waxaad had iyo jeer ka dhigi kartaa boos celin makhaayad wanaagsan ama waxaad diyaarin kartaa xaflad guri oo martida ay sidoo kale qadarin doonaan. Waa shir ee yaan loo dhawaan meherka laftiisa, wax kasta oo ka badan si uu waqti inoogu siiyo in aanu mid iyo mid kaleba habaynno dhib la’aan. Markaad haysato goobta, waxaad u qurxin kartaa hab fudud oo jaceyl ah, ubaxyo iyo maraqado munaasabadda. Si la mid ah, waxaad dooran kartaa menu xoogaa ka duwan, oo had iyo jeer daboolaya baahiyaha qadeeye kasta. Qado ama casho kasokow, waxaa sidoo kale jira hadiyado ay is dhaafsanayaan lamaanaha.
Maxaa la siinayaa lamaanaha
Waxaan horey u ognahay in waqtiga codsiga guurka uu faraantigu yahay kan jooga. Sidaa darteed, xilligan waxaan ka tagi karnaa doorashooyin kale. Tusaale ahaan, isaga waxay noqon kartaa saacad caadi ah ama smartwatch, qaar ka mid ah cufflinks, nooc ka mid ah shay uu ururiyoiwm. Iyadoo iyada ah waxaad sidoo kale dooran kartaa dahabka qaabka jijin, silsilad ama choker iyo xitaa hilqado. Laakin laga yaabaa in qalabyada qaarkood sida suunka wanaagsan ama xitaa kabo ay ku yaabin karaan. Waad ka boodi kartaa dhammaan borotokoolka oo aad dooran kartaa fikrad isaga ama iyada ka yaabban!
Intee in le'eg ayaa la sameeyaa ka hor arooska
Wax yar ka hor inta aan soo sheegnay in aysan aad u dhowayn arooska, haddii aad rabto inaad sameyso wax asal ah oo aad leedahay wax badan oo aad qorsheyneyso. Laakiin qiyaastii lama in ka badan ayaa lagu talinayaa in ku dhawaad ​​4 ama 6 bilood ka gudbaan soo jeedinta in arooska. Waa run in mararka qaarkood ay noqoto mid aad u kala duwan ama ka soo horjeeda. Sababtoo ah waxay ku xirnaan doontaa lamaane kasta. Xitaa qaar badan oo iyaga ka mid ah hadda ma doortaan qodobkan, inkastoo uu jiro codsiga guurka waxay si toos ah u tagaan arooska. Ma jeclaan lahayd inaad qaab ahaan u yeelato soo jeedintaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » U dabaaldeg soo jeedintaada qaab ahaan!
5 dawo oo dabiici ah oo lagu daaweeyo calaamadaha fidsan